Maxaa Imaan Kara Haddii Kaadida La Isku Celiyo Mudo Dheer? - Daryeel Magazine
Maxaa Imaan Kara Haddii Kaadida La Isku Celiyo Mudo Dheer?
Waxayny wada ognahay in marka kaadidu ina qabato oo aynu badankeennu si kedis ah ugu cararno suuliyada, innagoo xilliyada qaarkood dhibaato kala kulana marka aynu tagno iyadoo suuligii caamka ahaa uu qof kale ku jiro.
Mudoo intee le’eg ayuu qofku kaadida isku celin karaa?
Waxay ku xiran tahay cabbirka kaadi-haysta qofka, qadarka kaadida ku jirta, biyo cabbista, iyo awoodda kaadi isku celinta. Ragga ayaa badanaa xajin og marka loo barbardhigo dumarka.
Kilyaha ayaa soo saaro kaadida, waxaana lagu kaydiyaa kaadihaysta inta aan dibadda loo soo deyn, Marka kaadi haystu buuxsanto waxay fariin u dirtaa maskaxda si ay ugu sheegto inay doonayso inay kaadida sii deyso haddii kaadi dheeraad ah lagu soo daro kaadihaysta, haddana dareen in aad kaadisid ayaa dareemaysaa, haddana waad isku celin kartaa illa ay ka gaarto xad aadan xakamayn karin oo kaadida kaa farabaxsato.
Kadiihaysta waxaa ku wareegsan muruq ay shaqadiisu tahay inuu cadaadiyo kaadida si ay usoo baxdo. Markasta oo kaadihaystu buuxsanto muruqaan quwaddiisa ayaa kororta taasoo faaido noo leh waayo hadii kale kaadidu waxay ku noqonaysaa kilyaha waxayna noqonayaan howl-gab.
Maxaa dhibaato imaan kara hadii kaadida la isku celiyo?
Hadii marwalba kaadihaystu ay noqoto mid buux dhaafta oo kaadida lagu xannibo waxaa jilci kara xajiyaha kaadihaysta maadaama buux dhaafka ay samaynayo uu u kala bixinayo sida buufinta oo kale.
Kaadidu waxay ka kooban tahay dheecaano yaryar oo isku tagay kuwaas oo jirku uusan u baahnayn. Hadii kaadida la isku celiyo waxay waqti siinaysaa in bakteeriyadu ay ku taranto kaadihaysta sidaa darteed waxay khubarada caafimaadku ku taliyaan inaan si joogto ah la iskugu celin kaadida. Marka qofku kaadsho waxaa jirka kasoo baxa bakteeriyo iyo jeermisyo jirka ku nagaan lahaa hadii kaadida la isku celiyo. Sidoo kale haddi la isku xijiyo mudo dheer waxay waxyeello caafimaad u keenaysaa kilyaha.
Waxyaabo Aynu Inta Badan Sameyno Oo Dhaawici Kara Kilyaha Maxaa Ku Dhacaya Jidhkaaga Haddii Aad Maalin Kasta Cunto 3 Xabbo Oo Timir Ah?? Maxaa Kordhin Kara Caanaha Hooyada Ilmaha Nuujisa? 10 Qodob Oo Kaa Yareyn Kara Xanuunka Foosha